Ifulethi langoku kunye nelincinci kwiZahara Pueblo - I-Airbnb
Ifulethi langoku kunye nelincinci kwiZahara Pueblo
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMiguel iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yethu yokuyila eyi-minimalist yi-100% entsha kwaye ibekwe kumbindi wedolophu. Imizuzu nje emi-3 ukusuka elunxwemeni kunye nendawo yokutyela kunye nendawo yokuphumla kodwa kude nezona ndawo zinengxolo. Uya kuba nayo yonke into esandleni. Ilungele isibini kunye nomntwana.
Ibhaliswe kwi-Andalusian Tourism Registry enenombolo: VFT / CA / 00569
Indawo yethu inesitayile esincinci kunye nesisedolophini. Yintsha ngokupheleleyo kwaye ibekwe kakuhle kakhulu kwidolophu yaseZahara de los Atunes. Ikufutshane kakhulu kuzo zonke iinkonzo (imarike yokutya, iindawo zokutyela, njl.njl.) kodwa kude nezona ndawo zinengxolo. Ulwandle kukuhamba ngemizuzu emi-3 kuphela.
Le ndlu ibekwe kumbindi wedolophu yaseZahara de los Atunes. Ikufutshane kakhulu kuzo zonke iinkonzo kodwa kude neendawo ezinengxolo. Okona kulungileyo ukonwabela ulwandle kunye nazo zonke iinkonzo zedolophu ngaphandle kokuthatha imoto. Uza kuba nayo yonke into ekufuphi ukonwabela iholide yakho.
Soy de Santander aunque vivo en Valencia junto a Teresa, mi pareja.
Cada vez más cansados de la ciudad ya sólo pensamos en nuestra querida Zahara, en sus gentes y en sus playas en invierno o verano, por eso construimos allí nuestra pequeña casita y los dos apartamentos que alquilamos con cariño. No tenemos demasiada experiencia como anfitriones pero nos sobran ganas, ilusión y ganas de agradara nuestros huéspedes.
Nos gusta la naturaleza, la música y el cine pero cada vez me apreciamos más una buena serie en el sofá de casa, serán los años... Nuestras favoritas son: Los Soprano, The Wire, Breaking Bad, Juego de Tronos y últimamente True Detective y The Americans. Los Rolling Stones, Rhythm and Blues y algo de Flamenquito bueno llenan mi iphone.
Cada vez más cansados de la ciudad ya sólo pensamos en nuestra querida Zahara, en sus gentes y en s…
Kuthi ukurenta indawo yethu ayisiyongeniso eyongezelelweyo kuphela, kuninzi kakhulu. Siyakuthanda oko sikwenzayo kwaye sifuna ukubonelela ngenkonzo ebesingathanda ukuyifumana kwiiholide zethu.
Nje ukuba uqinisekise ugcino lwakho, siza kukuthumelela iSMS okanye i-WhatsApp enemiyalelo eneenkcukacha yokuqokelela kunye nokuhanjiswa kwezitshixo kunye nenombolo yefowuni yomntu oya kukufumana xa ufika. Ungalibazisi ukunxibelelana nam ngayo nantoni na oyifunayo. Ndihlala ndifumaneka, nokuba yifowuni, i-WhatsApp, iSMS, njl.
Siyathanda ukucebisa iindawo zokutyela kunye nemisebenzi kwaye siphatha iindwendwe zethu ngokubanzi ngendlela esithanda ukuphathwa ngayo kwiiholide zethu.
Kuthi ukurenta indawo yethu ayisiyongeniso eyongezelelweyo kuphela, kuninzi kakhulu. Siyakuthanda oko sikwenzayo kwaye sifuna ukubonelela ngenkonzo ebesingathanda ukuyifumana kwiih…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Zahara de los Atunes